Wararkii Ugu Danbeeyay Khasaarahii Ka Dhashay Roobabkii Dabaylaha Watay Ee Ku Dhuftay Magaalada Garbo-Dadar | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Wararkii Ugu Danbeeyay Khasaarahii Ka Dhashay Roobabkii Dabaylaha Watay Ee Ku Dhuftay Magaalada Garbo-Dadar
Posted on Agoosto 26, 2011 by giriyaadnews
Garbo-Dadar-(garbodadarnews) Wararkii ugu danbeeyay ee naga soo gaadhaya degaanka Garbada ee gobolka Salal ayaa waxa ay sheegayaan in ay isa soo tarayaan khasaarihii ka dhashay roobabkii watay dabaylaha ee ka da’ay degmadaas habeenimadii arabacada ahayd.
Hadaba sida uu khadka telefoonka noogu soo waramay duqa magaaladaas Cabdi Cilmi (Cabdi Hindi)” in ay jiraan khasaare dhinacyo badan leh,kuwaas oo iskugu jira xarumo dawladeed iyo guryo caadi ah oo ay dabayshu jiingadihii iyo wixii hoosyaalayba ay ka qaaday.
Mar uu ka hadlayay in khasaare dhaawac ama dhimasho uu jiro waxa uu yidhi” hal qof oo oday ah ayuu dhaawac fudud soo gaadahay”
Waxa kale oo uu noo sheegay meelaha sida rasmiga ah ay waxyeeladu soo gaadhay,”Dugsi Hoose/Dhexe, Saldhig Boolis,gurigii duqa magaalada,dadkii danyarta ahaa ee deganaa buulasha.
Ugu danbayn maayor Cabdi Hindi ayaa baaq u diray hay’adaha caalamiga iyo dawladaba in barakacayaasha abaartu soo gaadhay ee deganaa magaalada ee ay dhibtani hadana ku habsatay lala soo gaadho gargaar degdega , taas oo uu sheegay in ay iminka ugu daran tahay hoy ay ka dugsadaan roobabka iyo dabaylaha daran ee ka dhacaya degmadiisa.
Si kastaba ha ahaatee roobkan dabayalaha wata ee ka da’ay degmadan ayaanan ahayn kii ugu horeeyay ayse jireen kuwo waqtiyo hore ka dhacay, waxaana ay dadwaynuhu u baahan yihiin in lala soo gaadho kaalmo degdega.”
« Xaalada Caafimaad Ee Gabadhii Yarayd Ee Indhuhu Dhiiga Ka Socdeen Oo Ka Sii Daraysa+SAWIRO+VIDEO dhaantadu waa ciyaar nuucyo badan ee waligaa tani oo kale ma aaragtay daawo video »